Asara (volana malagasy) - Wikipedia
Ny Asara dia iray amin'ireo volana malagasy mitondra anarana avy amin'ny teny sanskrita. Ny volana Asara amin'ny Betsimisaraka sasany anefa ataon'ny Malagasy amin'ny ankamaroan'ny faritra hoe Maka na Volamaka. Io teny hoe Asara io ihany, amin'ny Betsileo sasany, dia ataon'ny Malagasy amin'ny ankamaroan'ny faritra hoe Sakave.
Amin'ny Antesaka dia fotoam-pahavokaran'ny vary ny Asara, ka mifanandrify amin'ny volana Desambra izany hoy i Richardson (1885) fa amin'ny Novambra - Janoary kosa hoy Rakotosaona (1972) sy i Descamps (1936).
Amin'ny faritra maro eto Madagasikara dia anondroana ny fizaran-taona mafana sy be orana, izany hoe ny fahavaratra (Rajemisa Raolisona 1985), ny teny hoe Asara. Amin'ny Tanala sy ny Bara dia ilazana ny fahavaratra ny teny hoe Asara, manao toy izany koa ny Sakalava,
Anaram-bolana avy amin'ny teny sanskrity: Hatsiha - Volasira - Faosa - Volamaka - Hiahia - Sakamasay - Volambita - Sakave - Asaramantsina - Asaramanitra - Asotry - Vatravatra.
↑ 1,0 1,1 et 1,2 "Asara", in Rakibolana malagasy sy Rakipahalalana momba an'i Madagasikara.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Asara_(volana_malagasy)&oldid=976048"
Voaova farany tamin'ny 21 Oktobra 2019 amin'ny 13:09 ity pejy ity.